AKHRISO: MD Farmaajo & Kheyre oo isku koobay xukunka dalka iyo Xaalad siyaasadeed cakiran oo jirta | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA AKHRISO: MD Farmaajo & Kheyre oo isku koobay xukunka dalka iyo Xaalad...
AKHRISO: MD Farmaajo & Kheyre oo isku koobay xukunka dalka iyo Xaalad siyaasadeed cakiran oo jirta
Wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska Xukuumada Federaalka Soomaaliya Cabdifitaax Ibraahim Geeseey ayaa shir jaraa’id oo uu Muqdisho ku qabtay kaga dhawaaqay in uu iska casilay xilka wasiirnimo.
Waxa uu sheegay in uu isku casilay xiisada ka taagan Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, isaga oo intaas ku daray in Xukuumadda Soomaaliya ay faragelin ku heyso maamulada dalka gaar ahaan midka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Hadaba hadalka wasiirka is casilay ayaa waxa uu si cad uu u muujinayaa in sida uu sheegay ay jirto faragelin toos ah oo ay xukuumada Soomaaliya ku heyso Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Inkastoo siyaasiyiinta ka aragtida duwan Xukuumadda Soomaaliya kol hore dhowr mar ku eedeeyeen in Xukuumada Federaalka ay farageliso maamulada dalka ka jira, balse iminka waxaa faragelintaas in ay jirto xaqiijiyay wasiirka is casilay, sheegayna in uu isku casilay faragelinta Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya xukuumada ku heyso.
Waxa uu Wasiirka is casilay sheegay in Xukuumadda uu ka tirsanaa ee Soomaaliya ay hareer mareyso ku dhaqanka Dastuurka taasina ay tahay sharci darro.
Waxa uu ugu dambeyntii Gudoomiyaha golaha Shacabka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Shiikh Cabdiraxmaan iyo dhamaan siyaasiyiinta kasoo jeeda Koonfur Galbeed ugu baaqay in ay ahmiyada siiyaan sidii ay kaga hortagi lahaayeen waxa uu ku tilmaamay af-gembi lagu haayo Koonfur Galbeed Soomaaliya.